Iindaba-Uhlobo olutsha lweeSilicone Reborn Babies
Nokuba uyathandana neentsana ezizalwe ngokutsha okanye ukhetha ukuvumela abanye ukuba bathathe inxaxheba ekuqokeleleni oonodoli banokuqokelela kwaye unomdla wokufunda ngakumbi ngazo, esi sithuba siza kusebenza njengesingeniso esisisiseko. Iintsana ezizalwe ngokutsha luhlobo lobugcisa olukhule lathandwa kuphela ukusukela oko amagcisa okuqala azalwa ngokutsha aqala ukudala ezi zidoli kuluntu ngokubanzi ebutsheni beminyaka yama-90. Ke ziziphi iintsana ezizelwe ngokutsha? Zingoonodoli abancinci bentsana okanye oonodoli be-vinyl abenzelwe ukubonisa ngokucacileyo iintsana kunye nabantwana abancinci.
Imbali emfutshane yeentsana ezizelwe ngokutsha
Inkampani yaseBerusaa yaseSpain yayiyeyokuqala ukuqala ukuvelisa iintsana ezizalwe ngokutsha kwiminyaka ye-1980. Benza oonodoli ngeethoni zesikhumba ezinjengobomi kwaye bongeze imithambo encinci eluhlaza okwesibhakabhaka ukubenza babonakale befana nobomi. Ukusuka kwesi siqalo sithobekileyo, iintsana ezizalwe ngokutsha ziye zaqhubela phambili ekubunjweni kwe-vinyl kunye ne-silicone sculpting enobunzima kunye nokuziva kosana olusandul 'ukuzalwa, kunye nezinye izinto ezinje nge-mohair efakwe iinwele, iinkophe, amehlo amahle e-glassware, kunye nezinto ezinje ngokuphefumla ngomatshini kunye nokuvakalayo ukubetha kwentliziyo. Olunye uqikelelo lubeka inani leentsana ezizalwe ngokutsha kumawaka angamashumi amabini kwihlabathi, kwaye oonodoli ngoku baveliswa ngamagcisa asekwe kwihlabathi liphela, kwaye igcisa ngalinye elizelwe ngokutsha linenkqubo yalo.
Uninzi loonodoli abazelwe ngokutsha benziwe ngezandla, nangona ungathenga iikiti ze-DIY kunye nezinto zokubumba ezingaphambi kokuba uzakhe, kwaye-kunjalo-ungathenga oonodoli abazalwe ngokutsha abagqityiwe nge-100% kwaye bakulungele ukwamkelwa.
Kukho abantwana abazelwe ngokutsha base-Afrika baseMelika kunye nokuzalwa kwakhona kweCaucasus, iintsana ezizelwe ngokutsha zase-Asiya kunye nonodoli bazo zonke iintlanga nezizwe. Elinye lala madoli lifana noogxa babo abaphilayo kangangokuba kude kubekho amabali (iintsomi mhlawumbi) zabantu abadlulayo abangena kwiimoto ezitshixwayo ukuze basindise oonodoli bokwenene besilicon, amaSamariya alungileyo adidekileyo emva koko amangalisiwe kwaye mhlawumbi othukile akufumanisa ukuba umntwana Akaphili, kodwa ufana nobomi kuphela.
Iintsana ezizelwe ngokutsha zinokubunjwa zifane neentsana zokwenyani, kwaye abanye bakhetha ukuthumela iifoto zabantwana abalahlekileyo okanye iintsana ezaziwayo ukuba bazisebenzise njengesikhokelo sabazobi abazelwe ngokutsha. Ukuzalwa kwakhona kweentsana kunokuba ngumthombo wovuyo kwizibini ezingenabantwana okanye kwabasetyhini abangakwaziyo ukukhulelwa. Abaqokeleli abanzulu bakulungele ukuhlawula amaxabiso oonodoli abazalwe ngokutsha. Unodoli ozelwe ngokutsha wePrince George wathengiswa ngaphezulu kweshumi elinamakhulu amathandathu eeponti.
Kukwakhona neemarike ezizalwe ngokutsha, kubandakanya oonodoli abazalwe ngokutsha kunye nonodoli abazalwa ngokutsha, nangona i-IRDA- Abazobi beDoll abazalwa ngokutsha - umzimba ojonga unodoli ozalwe ngokutsha kwimizi-mveliso kunye nemigangatho- ujonga kufutshane nakweyiphi na imfuno okanye indalo. Ukudala iintsana ezizalwe ngokutsha yinkqubo yokusebenza kunye neemodeli ezisisiseko zodoli ozalwe ngokutsha kubandakanya ukuqala ngotywala lwe-vinyl doll, kwaye emva koko ukongeza uluhlu lwepeyinti kunye nokubumba ezinye izinto.
Nokuba uhlawula umzobi ozelwe ngokutsha ukuze enze unodoli wakho, okanye ukuthenga kwakho ikiti esandula ukuzalwa ethengiswe kwivenkile ekhethekileyo ekuvumela ukuba uzenzele owakho unodoli, inkqubo "yokubeleka" into yokuzalwa ngokutsha iyaziwa njengokuphindaphinda. Umdali unoxanduva lokuvela kwedoli, kwaye ivinyl yeyona nto idumileyo esetyenzisiweyo ekwenzeni oonopopi abazelwe ngokutsha.
Nangona kunjalo, kutshanje, oonodoli abazalwe ngokutsha bayathandwa kakhulu. Isenokuba ngenxa yokuba zithambile kwaye zi-cuddlier. Oonodoli abazelwe ngokutsha baxelisa ukuthamba komntwana wokwenene. Iingalo zabo, izandla, iminwe kunye nemilenze yonke igobile njengemilenze yokwenene. Ngaphandle koko, ukuphindaphinda kwakhona kunikwe ipeyinti esetyenziswe ngesandla, amehlo anemivimbo emide, kunye nentloko egcwele iinwele ezintle.
Enye yezona zinto zibalulekileyo zoonodoli abazelwe ngokutsha abanokukhathaza abaqokeleli bonodoli ngumngcipheko wokuba ipeyinti yedoli inokuvela ukuba ayisiyipeyinti esemgangathweni okanye ivinyl. Kungenxa yoko le nto kubalulekile ukuba u-odole oonodoli bakho abazalwe ngokutsha kwindawo ethembekileyo. Iimveliso ezisetyenziselwa ukwenza oonodoli be-silicon zikhethekile kwaye azinakuthengwa kuyo nayiphi na ivenkile yehardware. Amehlo eglasi aseJamani asetyenziswa kuninzi lweedoli zesilicon, kwaye oonodoli bazaliswe ziipellets ezinobunzima njengosana olusandul 'ukuzalwa.
Kwaye njengoko besitshilo ngaphambili, unokwenza unodoli wakho wosana ozelwe ngokutsha. Abanye abaqokeleli kunye nabathengi bongeza kwizinto ezenza oonodoli babo babonakale befana nobomi, umzekelo umazibuthe unokuncanyathiselwa emlonyeni wosana oluzelwe ngokutsha ukuyivumela ukuba ibambe isiqhoboshi. Okanye isixhobo se-elektroniki sinokufakwa ukulawula ukunyuka nokuwa kwesifuba sabo, ukuxelisa usana lokwenyani kunye nokuphefumla kwalo.